အဘယ်ကြောင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအသုံးပြုမှု (Bing နှင့်အတူကြာမြင့်စွာနေကြပြီး) တစ်ခုစွဲစွန့်စားမှုဖြစ်သနည်း
မကြာခဏဆိုသလိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်းသည်ယနေ့သုံးစွဲသူများအတွက်အကျွမ်းတဝင်ရှိနိုင်သောအန္တရာယ်များရှိသည်။ ၎င်းတို့တွင်ပိုမိုအစွန်းရောက်သောပစ္စည်းများ၊ ပိုမိုဆိုးရွားသည့်လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးနှင့်ကျေနပ်မှုနှင့်စွဲလမ်းမှုတို့ပါဝင်သည်။ ၎င်းတွင်တကယ့်မိတ်ဖက်များနှင့် (anorgasmia နှင့်စိတ်မချရသောစိုက်ထူမှုများ) ကိုစွဲလမ်းမှုတဖြည်းဖြည်းဆုံးရှုံးခြင်းလည်းပါဝင်နိုင်သည်။ လူသိနည်းသောအချက်မှာပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအသုံးပြုခြင်းသည်ဆေးစွဲမှုကိုများစွာဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၂ နာရီကြာအရက်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်အခြားအရက်မသောက်မီရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ရှောင်ကြဉ်ပါ။ အကြောင်းပြချက်များသည်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဖြစ်သည်။ စွဲလမ်းမှုသုတေသနတစ်ခုလုံးရှိသည် ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအသုံးပြုမှု တိရစ္ဆာန်များနှင့်လူသားအတွက်တာဝန်ရှိဦးနှောက်ဖြစ်ရပ်များ elucidating ။
ဥပမာအားဖြင့်, နှစ်ဦးစလုံး ဆေး နှင့် junk အစားအစာ လေ့လာမှုများပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအသုံးပြုမှုကိုပိုမိုလျင်မြန်စွာဦးတည်သွားစေနိုင်သည်ဟုထုတ်ဖေါ် စွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများ (အသုံးပြုသူအပြည့်အဝလွစွဲသို့ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဖြစ်စေမ) ။ အဆိုပါမူလတန်းပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပါသည် ာင်း အရာမတရားသောလျစ်လျူရှုရန်ခက်ခဲထုတ်လုပ်ကြောင်းအချက်ပြနှင့်အတူဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ်စင်တာဝေဖန်။ ာင်းနှင့်အတူ, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆုလာဘ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဦးနှောက်ဆားကစ်ကတော့စွဲလမ်းအပြုအမူနှင့်ပတ်သက်သောအမှတ်တရများသို့မဟုတ်တွေကိုမှ Hyper-အထိခိုက်မခံဖြစ်လာရှာကြံ။ ဤသည်၌နက်ရှိုင်းသော pavlovian အေးစက်ရလဒ်များကို "လို" သို့မဟုတ်တပ်မက်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သော, ကွန်ပျူတာဖွင့်တဲ့ pop-up ကိုမြင်လျှင်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးတည်းဖြစ်ခြင်းအဖြစ်တွေကို, porn များအတွက်ပြင်းထန်သောမတရားသောဖြစ်ပေါ်။ porn အသုံးပြုသူများကိုထိခိုက်သို့မဟုတ် cue-reactivity ကိုသတင်းပို့ (လေ့လာရေး: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.)
ပို. ပင်ထူးခြားပြောင်မြောက် abstinence ၏ကာလ (2-4 ရက်သတ္တပတ်) ဖြစ်ပါသည် neuroplastic အပြောင်းအလဲများကိုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ ထိုကဲ့သို့သောရှည်လျားသောအားလပ်ရက်မယူသောသူတစ် ဦး အတွက်မဖြစ်ပေါ်ဘူး။ ဦး နှောက်ထဲမှာဒီပြောင်းလဲမှု အသုံးပြုရန်မတရားသောတိုးမြှင့် အစပျိုးတုံ့ပြန်။ ထို့အပြင်အဆိုပါ စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်ကအပြောင်းအလဲများ ပင်အသေးစားစိတ်ဖိစီးမှုအကြောင်းမရှိစေနိုင်ပါတယ်ထိုကဲ့သို့သော သုံးစွဲဖို့မတရားသော.
အထူးသဖြင့်အတွင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းစားသုံးမှု ( တစ်မူးရူး၏ပုံစံ) ကိုလည်းထုတ်လုပ်နိုင်သည် ပြင်းထန်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေထိုကဲ့သို့သော lethargy အဖြစ်, စိတ်ကျရောဂါ နှင့် မတရားသော။ တစ်စုံတစ်ဦးက abstinence တစ်ခုကြားဖြတ်အစိုးရပြီးနောက်ကိုအသုံးပြုသည်နှင့် Bing သည့်အခါတစ်နည်း, ခက်ခဲအသုံးပြုသူထိမှန်နိုင်သည် - ဖြစ်ကောင်းကြောင့်၏ ကြီးထွားပြင်းထန်မှု အတွေ့အကြုံ၏။
ဒီသုတေသနအပေါ်အခြေခံပြီးသိပ္ပံပညာရှင်များဆို၏နေ့စဉ်စားသုံးမှုနိဂုံးချုပ်ပါပြီ ကိုကင်း, အရက်, စီးကရက်ဒါမှမဟုတ် junk အစားအစာ စွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကို generate မှမလိုအပ်ပါဘူး။ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း Bing စဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုမှုကဲ့သို့တူညီသောအရာမနှင့်အချို့သောကိစ္စများတွင်လုပျနိုငျ နောက်ထပ်.
အုပ်စုတစ်စုကပိုပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအသုံးပြုသူများသည်တို့ပါဝင်သည်ဖွယ်ရှိဖြစ်သောဘာသာရေးနှင့် nonreligious porn သုံးစွဲသူများအကြားအဖြစ်? ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းသုတေသနပေးထား ဘာသာရေး porn အသုံးပြုသူများက porn ကို အသုံးပြု. ခံရဖို့မကြိုက်တတ်တဲ့, ဖြစ်ကောင်းတစ်မူးရူး-abstinence သံသရာထဲမှာဝဲလောကအသုံးပြုသူများသည်ထက် ပို. ဘာသာရေးရှိပါတယ်။ ဒါကဘာသာရေးအသုံးပြုသူများသည်ဖြစ်လေ့မယ် "ဟုပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအသုံးပြုသူများသည်။ " သုတေသနဒီထွက်သမုတ်သော, တစ်ဦးအဆိုအရသိရသည် အမြိုးသမီးမြား porn အသုံးပြုသူများကိုအပေါ်လေ့လာချက်အသစ်။ အဆိုပါသုတေသီများ said:
ရရှိနိုင်သောစာပေတှငျကြှနျုပျတို့သူတို့ disinhibition တဲ့ကာလအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ညစ်ညမ်းရှောင်၏ကာလ, မြှင့်တင်ရန်နှင့်အလွန်အကျွံမှ PU (ဘာလို့လဲဆိုတော့အချို့ကိစ္စများတွင်တင်းကျပ်လူမှုရေးစံချိန်စံညွှန်း, ပြဿနာမှ PU [porn အသုံးပြုမှု] အထောက်အကူပြုစေမည်အကြောင်းသက်သေအထောက်အထားရှာတှေ့နိုငျCarnes, 1983; Kraus, Martino, et al ။ , 2016; Wordecha, Wilk က, Kowalewska, Skorko, & Gola, 2017).
ယေဘူယျအားဖြင့်လောကသုံးစွဲသူများသည်အားလပ်ချိန်များကိုရက်အနည်းငယ်ထက်နည်းလေ့မရှိသလောက်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများကိုဖြတ်တောက်ရန်ကြိုးစားနေသောကြောင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသုံးစွဲသူများမဖြစ်လျှင်။ အကယ်၍ သူတို့သည်ကြာရှည်စွာအသုံးမပြုခြင်းကြားတွင်အငွေ့ပျံမည်ဆိုလျှင်သူတို့သည်မဖြစ်မနေတိုးများလာလိမ့်မည်။ အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သောများစွာသောသုတေသနများအရဤဖြစ်နိုင်ခြေကိုနက်နက်နဲနဲစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ခံထိုက်သည်။ စိတ်ရောဂါပညာရှင်များကြောင့်ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူများအားအလွန်အကျွံအာရုံစူးစိုက်ခြင်းမှာ“ အရှက်တကွဲဖြစ်ခြင်း” သည်တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းအရင်းဖြစ်သည်ဟုယူဆသောကြောင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအသုံးပြုခြင်း + အနိုင်ကျင့်ခြင်းသို့ ဦး တည်စေသည်။ ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းမှုသည်လူတို့အားမိမိကိုယ်ကိုစွဲလမ်းစေသူများအဖြစ်ထင်မြင်စေသည့်ယူဆချက်ဖြစ်သည် မထောက်ပံ့ဘူး မကြာသေးမီကသုတေသနပြုခြင်းဖြင့်။
ဒါပေမယ့်နောက်ကျောအဓိကအချက်။ ရံဖန်ရံခါညစ်ညမ်းသောတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည် (မူးရူးခြင်းမရှိဘဲ) သည်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော abstinence-binge ပုံစံထက်စွဲလမ်းမှုအန္တရာယ်နည်းပါးသည်။ သင်၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပိုမိုအသုံးဝင်အောင်လုပ်နိုင်သောကြောင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းမူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာမထားပါနှင့်။ သင်တိုက်တွန်းခံရလျှင်ဤအတွေးအခေါ်အချို့ကိုစမ်းကြည့်ပါ -
အနီရောင် X ကို
အထူးသဖြင့်လူတစ် ဦး ပါဝင်ခဲ့သောအရှည်ဆုံးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာကြည့်ရှုခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးအပြုအမူ၊ အပြုသဘောဆောင်သည့်ကုသမှုရှာဖွေခြင်း၊ အတွေ့အကြုံရှိရောဂါလက္ခဏာပြင်းထန်မှုနှင့်လေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်သူများအုပ်စုတစ်ခုလုံးအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးမှုခံစားချက်များနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည်။ သီးခြားစီစဉ်းစားသောအခါလက်တွေ့နှင့် Non- လက်တွေ့အုပ်စုများအတွက်အလားတူအကြီးအကျယ်မှန်သည်။
... .. ဒါကပြင်းထန်သောဖြစ်စဉ်များဆိုင်ရာအပြုအမူများတွင်ပါဝင်မှုသည်လူတစ် ဦး ၏အခြေခံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအဆင့်၊ လိင်စိတ်သဘောထားများနှင့် ဦး စားပေးမှုများနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာဆက်နွယ်နေနိုင်သည့်ကြိမ်နှုန်းမြင့်သောအပြုအမူများထက်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည့်ညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ဟုညွှန်ပြနိုင်သည်။
…ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများပါဝင်သောအကြောင်းအရာ (ကွဲပြားခြားနားသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ အကြမ်းဖက်မှု၊ အုပ်စုလိုက်လိင်မြင်ကွင်းများ၊ အရွယ်မရောက်သေးသူများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမြင်ကွင်းများနှင့်ဆန့်ကျင်သောကြောင့်ယခုလေ့လာမှုတွင်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လိင်မှုဆိုင်ရာလိင်ဆက်ဆံခြင်း) ကိုဆုံးဖြတ်ရန်သိသိသာသာကုသမှုခံယူခြင်းနှင့် လေ့လာမှုသင်တန်းသားများအကြားရောဂါလက္ခဏာပြင်းထန်မှု။
…။ ဖော်ပြပါရလဒ်သည်သီးခြားဝိသေသလက္ခဏာများဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာရွက်များကိုစားသုံးရန်စိတ်အားထက်သန်မှုသည်ပိုမိုအခြေခံကျသောကန ဦး ဦး စားပေးမှုကိုထင်ဟပ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ပိုမိုသည်းခံနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ပျက်အားလျော့ခြင်းများကိုတိုက်ရိုက်မဆိုလိုပေ။